Global News and Knowledge – Just another WordPress site
ငါးတစ်ကောင်တည်းကို (၂၂) သိန်း ရရွိသြားတဲ့ မြိတ်ဒေသက တံငါသည်ကြီးတဦး
မြိတ်ဒေသက တံငါသည်တစ်ဦး ငါးတစ်ကောင်ကို သိန်း ၂၂ သိန်းနဲ့ ရောင်းထွက်သွားတဲ့အကြောင်း အရာဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ တံငါသည်ကြီး ၂၂ သိန်းနဲ့ ရောင်းလိုက်တဲ့ ငါးက ကသမျှင်ငါး (အမ) လို့ သိရပါတယ်။ ကသမျှင်ငါး က တန်ဖိုးအလွန်ကြီးတဲ့ ငါးဖြစ်ပြီး သူ့တစ်ကောင်ရဲ့ပေါက်ဈေးက ပုံမွန္ဆို သိန်း ရာနဲ့ချီတောင် ပေါက်ဈေးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထီးဈေးက အမဈေးထက် ပေါက်ဈေး ပိုမြင့်ပြီး ငါ့မွာပါတဲ့ စီပေါင်းကအဓိက အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ ဈေးကြီး ရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ...
အပြုံးချိုလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည် ရဲ့ သမီးလေး မီယာ
ပရိသတ်ကြီးရေ အွန်လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည် ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမကေတာ့ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ဘဝမွာ CDM ပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားထဲရပ်တည်ရင်း စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ဒါကြောင့် ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည် ကို ပုဒ္မ ၅၀၅ ကနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာကြောင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရင်းနဲ့ပဲ မိသားစုနဲ့အတူ တိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည် ဟာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရလို့ ရှောင်တိမ်းရင်း လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာပဲ ရင်သွေးငယ်လေးကို အောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသမီးလေးရဲ့ နာမည်ကို မီယာ လို့အမည်မှဲ့ထားပြီးတော့ ...
၄၆နှစ်အကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်မှာ ၎င်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးသောကလေးများဖြစ်တဲ့ အမွှာနှစ်ယောက်ကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တဲ့ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး
အချို့သောစုံတွဲများဟာ လက်ထပ်ပြီးပြီးချင်း ကလေးမွေးတန်ကြပေမဲ့ အချို့သောစုံတွဲများအဖို့ ၎င်းတို့ရဲ့ကလေးအား ၎င်းတို့ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာမြင်ရဖို့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းနေကြရပါတယ်။ Nigerian ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အနေနဲ့ကလည်း ၎င်းတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးကို ၎င်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာချီထားနိုင်ဖို့အတွက် ဆယ်စုနှစ်လေးခုကျော်အထိ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ အသက် ၆၈ နှစ်အရွယ် Margaret Adenuga အမည်ရှိအမျ်ုးသမီးတစ်ဦးဟာ ၄၆ နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်မှာ လှပတဲ့အမွှာကလေးများကို မကြာသေးခင်ကမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Margaret ဟာ သူမရဲ့ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်ကိုမဆောင်ခင်မှာ IVF လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သုံးကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် Noah Adenuga ကလည်း သူတို့ဟာ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကတည်းက လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ရဲ့ကလေးကို ...
စွန့်ပစ်ထားသောသစ်သားနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖောင်တစ်စီးဖြင့် တစ်နာရီကြာခရီးကို လက်ဗလာဖြင့် ပင်လယ်ရေပေါ်တွင်လှော်တက်ခြင်းဟာ လူတိုင်းလုပ်လိုသည့်အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပေမဲ့ ဤဖိလစ်ပိုင်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးအတွက်ကတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါဘဲ။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင် Reymark Cavesirano အမည်ရှိကောင်လေးဟာ သူ၏မိသားစုကို ကျွေးမွေးပြုစုနိုင်ရန်လုံလောက်သော ရွေးစရာအလုပ်တစ်ခုသာရှိပါတယ်။ ၎င်းအလုပ်ဟာ သူ့အား ပင်လယ်ထဲရှိဝေးလံသောငါးဖမ်းလှေများသို့ နေ့တိုင်းလှော်ခတ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ငါးဖမ်းလှေဟာ မနီလာပင်လယ်အော်နဲ့သိပ်မဝေးပေမယ့် ကောင်လေးဟာ ထိုနေရာသို့အချိန်မီရောက်ဖို့ မနက်အရုဏ်မတက်ခင်မှာ ထွက်ခွါရပါတယ်။ ထို့နောက် သူဟာ သူ့ရဲ့ယာယီဌားရမ်းထားတဲ့သစ်သားဖောင်ဖြင့် ၎င်းငါးဖမ်းလှေဆီသို့ လက်ဗလာဖြင့် လှော်ခတ်သွားရပါတယ်။ လှေပေါ်မှာ Reymark က ငါးဖမ်းပိုက်မှာကပ်နေတဲ့ငါးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သူ့အသက်ထက် နှစ်ဆကြီးတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့အတူ ...
(ထုံးတို့မီးသွေးတို့/ မျှစ်တို့) ဒီအလုပ်တွေနဲ့ အသက်မွေးနေတဲ့ သူတွေဆီကဈေးဝယ်မယ်ဆို ဘယ်တော့မှ ဈေးမဆစ်ပါနဲ့
ကိုယ့်အဖေလည်းပြောဖူးတယ်..ထုံးတို့မီးသွေးတို့/ မျှစ်တို့များဘယ်တော့မှ//၊ ဈေးမဆစ်ပါနဲ့သမီးရယ်.တဲ့.မဝယ်နိုင်ရင်မဝယ်ပဲနေလိုက်ပါတဲ့။ ထုံးဖုတ်မီးသွေးဖုတ်အလုပ်ဆိုတာပူပူလောင်လောင်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရလို့..သိပ်ပင်ပန်းဆင်းရဲကြတာ ကိုယ်ချင်းစာပါသမီးရယ်တဲ့.. ”မဆစ်နဲ့” မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) နဲ့ ပက်သက်လို့ ဖေဖေ့စိတ်ထဲမှာ စွဲသွားတာလေးတခုက “မဆစ်နဲ့” ဆိုတဲ့ စကားလေး သမီးရဲ့။ ဟုတ်တယ် သူပြောဖူးတယ် ” မဆစ်နဲ့”လို့။ ခရီးတစ်ခုတော့ ခရီးတစ်ခုပဲ သမီးရဲ့။ မကွေးဘက်လား၊ မုံရွာဘက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် မတ္တရာဘက်လား၊ ဖေဖေကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ဘူး။အဝေးပြေးကားကြီးနဲ့သွားကြရာက…တစ်နေရာ ကားခဏထိုးရပ်လိုက်တဲ့အခါရေသန့်ဘူးရောင်းတဲ့ ကလေးမ ကလေးတစ်ယောက် ကားအနားကို ကပ်လာပါလေရောလို့ ဆိုပါတော့။ ရေခဲစိမ်ထားလို့ထင်ပါရဲ့၊ သူ့လက်ထဲက ရေသန့်ဘူး သုံးလေးဘူးဟာ ရေတွေသီးလို့.. ...
ခြတောင်ပို့မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပြီး လူတွေ အမျိုးမျိုးခေါ်နေကြတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းလေးတွေ.
ရပ်စောက်မြို့တောင်ဖက် ၇မိုင်အကွာ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာမှာ ရှာတွေ့ထားတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ပစ္စည်းလေးတွေပါ။ဒါလေးတွေကို ရှာတွေ့သူကတော့ Shwe Boon ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ရှာတွေ့ထားပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး group ထဲမွာ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးတွေကို ခြတောင်ပို့ထဲက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာမည်အမျိုူမျိုးခေါ်နေကြပါတယ်တွေရှိသူကိုယ်တိုင်ကတော့ချဆီဖူးလို့ ခေါ်ပြီးအခြားလူတွေကတော့ ခြသံ၊ ခြသည်းချေစသည်ဖြင့်အမျိုူမျိုးပြောနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ် လူတစ်ယောက်ကလည်းချသည်းခြေလို့ခေါ်ပေါတယ်အလုံးထိပ်ကအညှာရှိတယ်ချက်တံလိုလို ကြာလို့ ဆွေးရင် နှိပ်ကြည့်ပေါက်သွားသုံးမရဘူး.. လတ်ဆတ်နေရင် နေလှန်း လုံးကျစ်လာမယ် ရေငတ်ဝမ်းသွားတာတို့ လေဖြတ်တာတို့ အသုံးပြုကြတယ် .. ချပို့က နှစ်ကြာလို့ရှိတာပါ နှစ်အနည်းငယ်ဆိုမရှိပါ .. ချသည်းခြေက ရှားပါးပါတယ် ...
အိမ်က လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းအိုးတွေ ပျက်ရင်… ပြန်သုံးလို့ရအောင် ပြုပြင်နည်း(ပြန်လည် မျှဝေပေးပါသည်)
လျှပ်စစ်မီး ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာ အသုံးများကြတဲ့ လျှပ်စစ် ထမင်းပေါင်းအိုး ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ ပြန်ပြင်သုံးလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးပါမယ်။ ပေါင်းအိုး ပြစ်ချက်များကတော့… (၁) Power supply မီးအဝင်ခေါင်း အရည်ပျော်နေတယ်။ (၂) ခလုတ်(check point) မကြာခန တက်နေတယ်။ ပြစ် ချက် (၁) အတွက် အောက်ခံကြွေသားပါတဲ့ မီး အဝင်ခေါင်း ဆော့ကက်အထိုင် ကို လျှပ်စစ် အပိုပစ္စည်းဆိုင်တွေ မှာ၅၀ဝိ နဲ့ ဝယ်ပြီး ပုံမှာ ပြထားသလို လဲပေးလိုက်ရင် ရေရှည် အသုံးခံတဲ့ ...
မိမိ ဘုရားရွိခိုးတဲ့ အချိန်မှာ အိမ်မြောင်စုပ်ထိုး ပြီဆိုရင်တော့ အိမ်မြောင်ဆိုတာ အိမ်တော်တော်များများမှာရှိတက်ပါတယ် အိမ်မြောင်ဟာ အလကားနေရင်း အားတိုင်း စုပ္မထိုးပါဘူး အိမ်မှာ အကြောင်းတစ်ခုခုရှိရင်လဲ စုပ်ထိုးတက်ပါတယ်။ မိမိ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန် အမျှဝေတဲ့အချိန် ဆွမ်းကပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အိမ်မြောင်စုပ်ထိုးရင် ကောင်းပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ သူဘာသူ စုပ်ထိုးတက်တာလဲရှိပါတယ်။ ကိုယ်စောင့်နတ် အိမ်စောင့်နတ် နတ်ကေင်းနတ်မြတ်များဟာ မိမိ ဘုရားရွိခိုးတာ ဆွမ်းကပ်တာ အမျှဝေတာကို လိုလားနှစ်သက်ကြပါတယ် မိမိက အမျှဝေတာ မေတ္တာပို့တာတွေကြောင့် နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေဟာ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတောက်ပလာခြင်း ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမာလာခြင်း ...
အိမ်မက်ထဲမှာ မြွေတွေကိုတွေ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာတတ်သလဲ( မြွေအိပ်မက်နိမိတ် ၇မျိုး)
မြွေတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရင်တကယ်ကံကောင်းမှာလားအိပ်မက်ပုံအရသင့်ကံကြမ္မာဘာတွေဖြစ်လာတတ်သလဲ ၁။ မြွေကိုကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ အိပ်မက်ထဲမှာမြွေကကိုယ့်ကိုကိုက်တော့မယ့်ပုံစံပေါက်တော့မယ့်ပုံစံနဲ့လိုက်လာလို့ ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်တယ်ဆိုရင် သင့်ထံသို့ကံမကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုမကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာလို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၂။ မြွေနဲ့တရင်းတနှီးကစားနေရတယ်လို့ မြင်မက်လျှင် သင်ဟာပြင်ပမှာတော့ မြွေကိုသေမလိုကြောက်ပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာ ကစားနေတယ်လို့ မြင်မက်တယ်ဆိုရင် သင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့အ ရင်းအမြစ်ကို ရှာတွေ့ပြီးမကြာခင် ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ၃။ မြွေအရေခွံလဲတာကို သင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ မြင်မက်လျှင် အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေတစ်ကောင်အရေခွံလဲနေတာကို သင့်မျက်စိရှေ့မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရင် မကြာခင်အချိန်မှ ာသင့်ထံသို့ကောင်းသော ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုတွေ ရောက်လာတော့မယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၄။မြွေကိုသတ်ရတယ်လို့ အိပ်မက်မြင်မက်လျှင် အိပ်မက်ထဲမှာ ...
လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးသူတိုင်း ဒီပို့လေးကို ကျော်မသွားပါနဲ့… အရေးကြီးလို့ပါ
သင်.. လက်ဆစ်တွေ ချိုးဖူးပါသလား…. အရေးကြီးတယ်နော် လက်ဆစ်ချိုးတာက လက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ပြောစမှတ် တစ်ခုရှိပါတယ်။ လက်ဆစ်ချိုးရာမှ ထွက်လာတဲ့အသံက သင့်အတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါသလား။ အဆစ်အမြစ်တွေဟာ လက်တွေ လှုပ်ရှားတဲ့အခါ အရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပွတ်တိုက်မှု လျှော့နည်းစေတဲ့အရည်တစ်မျိုး synovial fluid ရှိရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာ ဂတ်စ် (အောက်စီဂျင်၊ နှိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ လက်ဆစ်ကို ဖောက်ခနဲမြည်အောင် ချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား နေရာဟစေပါတယ်။ ပိုဟလာတဲ့ နေရာလပ်က synovial fluid စုပ်ယူပေးတဲ့ ဖိအား၊ ...